Ndịàmà Jehova Na-aga Ibuga Isi Ụlọ Ọrụ Ha n’Ebe Ọzọ na Niu Yọk
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hindi Hungarian Iban Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lithuanian Malagasy Malay Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Portuguese (European) Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek (Roman) Valencian Xhosa Yoruba Zulu
Ndịàmà Jehova Na-aga Ibuga Isi Ụlọ Ọrụ Ha Ebe Ọzọ
N’ọnwa Julaị afọ 2009, Ndịàmà Jehova zụtara ala ebe ọzọ na Niu Yọk dị n’Amerịka. Ọ bụ ebe ahụ ka ha chọziri ka isi ụlọ ọrụ anyị dịrị. Ala ahụ dị puku plọt abụọ, narị abụọ na iri asaa na asaa. E si n’ebe isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin kemgbe afọ 1909 gawa ebe ala ọhụrụ anyị ahụ dị, ọ dị ihe dị ka kilomita iri asatọ.
Ihe dị ka narị mmadụ asatọ na-eje ozi na Betel ga-ebi ebe ahụ. A ga-arụ ụlọ dị iche iche, ma nke ga-abụ naanị ọfis, ma nke ndị na-ahụ maka ọdịmma ndị na-eje ozi na Betel ga-anọ na-arụ ọrụ. A ga-arụkwa ụlọ elu anọ ebe ndị na-eje ozi ebe ahụ ga-ebi. E bukwa n’obi ịrụ ebe ndị mmadụ ga na-abịa elere ọtụtụ ihe Ndịàmà Jehova jirila rụọ ọrụ ịkụziri ndị mmadụ Baịbụl.
N’ala ahụ a zụtara, ebe a ga-arụ ihe niile a ga-arụ arụ ga-adị narị plọt anọ na ise. A gaghị arụ ihe ọ bụla ugbu a n’ebe ndị ọzọ fọrọnụ. Ebe ndị a ga-eji ahịhịa chọọ mma agaghị ebu ibu. Ebe ndị ga-abụ ọhịa ga-agba ụlọ ndị a ga-arụ gburugburu. A ga-arụkwa ihe niile otú ha na-agaghị emebi osisi ndị e nwere ebe ahụ.
Ndị na-ese otú ụlọ a ga-arụ ga-adị esechaala otú ihe niile ga-adị ma a rụchaa ya. A rụọ ihe niile otú ahụ ha si see ya, ọ ga-eme ka ego a na-emefu iji lekọta isi ụlọ ọrụ anyị belata. Dị ka ihe atụ, a ga–adọ ahịhịa pụrụ iche n’elu ụlọ ndị ahụ. Ọ ga na-amịkọrọ mmiri ozuzo, na-emekwa ka ime ụlọ ghara ịna-ekpo oké ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oké oyi. A ga-arụ ụlọ nke ga-abụ naanị maka ọfis otú ìhè ga na-abata na ya. A ga-arụkwa ihe niile otú a na-agaghị na-emefusị mmiri.
Gịnị mere e ji chọọ ibuga isi ụlọ ọrụ anyị ebe ọzọ? N’oge mbụ, ọ bụ naanị na Bruklin ka a na-anọ ebipụta Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl. Ma ugbu a, e nweela alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova ndị sozi ebipụta ihe ndị a n’ebe dị iche iche n’ụwa. N’afọ 2004, a kwụsịrị ibi akwụkwọ anyị na Bruklin, malitezie ibi ha na Wọlkil dị na Niu Yọk. E si Bruklin gawa Wọlkil, ọ dị ihe dị ka otu narị kilomita na iri anọ na ise.
Ihe ọzọ e lebakwara anya bụ ego e ji elekọta ihe ndị a rụrụ na Bruklin. Ilekọta ụlọ anyị ndị ahụ dị na Bruklin na-efu nnukwu ego. Ma, ebe ọ bụ na ụlọ niile ga-adị otu ebe na nke ọhụrụ a a ga-arụ, ọ ga-eme ka e jiri ego ndị a gaara eji na-elekọta ha akwado ọrụ ịkụziri ndị mmadụ Baịbụl.
Tupu ndị gọọmenti enye ikike ka a malite ọrụ, ha ga-eleba anya n’otú ụlọ ndị ahụ a chọrọ ịrụ ga-adị. Ọ bụrụ na ihe niile agaa ọfụma, a ga-amalite ọrụ n’afọ 2013. Ọ ga-ewekwa afọ anọ iji rụchaa ha.
E wezụga ebe a na-anọ ebi akwụkwọ na Wọlkil, Ndịàmà Jehova nwekwara ebe ha na-anọ akụzi ihe na Patasịn dị na Niu Yọk. Anyị nwekwara alaka ụlọ ọrụ ná mba dị iche iche. Ndịàmà Jehova nọ n’ụwa niile karịrị nde asaa na narị puku ise.